Semalt Inotsanangura Zviitiko Zvaunofanira Kufunga Paunenge Uchitsvaga Izvo Zita Rokuda
Paunenge uchifunga nezvekugadzira nzvimbo iripo paIndaneti, chinhu chekutanga iwe unofaniraita kuti ubhabhatidze nzvimbo yako. Kusarudza zita renzvimbo kunokosha nekuti richaitazvichiita kuti iwe kubudirire kana kukanganisa mukutora kwako. Zita renzvimbo inoita kuti iwe uite paIndanetikuvapo, kuita kuti webhusaiti yako ionekwe. Tichitsvaga zita rakakodzera rechirongwa,chengeta pane zvimwe zvinhu, kuti Semalt Digital Services inotungamirira nyanzvi, Julia Vashneva, anokurudzira kuti ufungisise.
Kuwana kambani yakavimbika kunokosha. Kazhinji kacho dzimwe dzekambani dzinotanga kuzivisamisangano yakawanda, uye gare gare, kubatana navo kunosvika kunyadzisa. Pane rimwe divi,mamwe makambani anotengesa mitengo yakakwirira asi haasi kupa maitiro ekufananidzira. Ita chitsva chekuongororapane imwe kambani yaungada kushanda nayo kuitira kuti iwe uzive chokwadi pamusoro payo.
Paunenge uri mukugadzirisa zita rako rezita rako, kusarudza zitainogona kuva dambudziko dzimwe nguva. Zvamunoda kufunga ndezvokuti zita rinofaniraIva nyore kuyeuka uye kuva nehukama hwepedyo nebasa iro webhusaiti yakoinofanira kuita. Uyezve, inofanira kunge iri zita nezwi iro riri nyore kutsvaga.
Kodzero yezita rezita
Iva nechokwadi chokuti zita rezita ramunosarudza harisi rekodzero yevamwe vanhu seyiyizvinogona kukuunza mhosva yepamutemo. Zvichava zvakanaka kuvimbisa kuti kambani, iyo iweyakasarudza pakunyoresa chigaro chako, yakanyatsotsanangura mutemo wemushandisi pane mazita emudunhuvanopa. Ita chisarudzo chakanaka chekuwedzera kuti uchishandise muzita rako remudunhu, semuenzaniso,inogona kuva .com .net .org uye nezvimwe zvakawanda, zvinoenderana nezvinangwa zvewebsite yako.
Kusarudzwa kwemashoko makuru akakodzera inokosha inofanira kuongororwa paunosarudzadomain name. Tsvaga injini dzinoita seine nyasha ye keyword-rich domain name. Munyaya iyi, iweanofanira kuedza uye kushandisa izwi guru rekutanga kana kuti mutsara unoda kuwedzera webhusaiti yakouye edza uye kuishandura kunopoteredza zita remudunhu.
Unofanirwawo kuedza kuti usasina zita rako rekugadzirisa mazita newe web host host. Nokutikana ukasarudza kuparadzanisa nzira nemukuru wako (izvo zvinowanzoitika), inova musoro wekutendanzvimbo yako, zvakare, zvichava zvakanaka kana iwe ukazvitsaura Source .